Home Wararka Goobaha ganacsiga ee magalaada Jowhar oo maanta albaabada loo xiray
Goobaha ganacsiga ee magalaada Jowhar oo maanta albaabada loo xiray
Maamulka Hirshabeelle ayaa amar ku bixisay in aan la furi karin Goobaha Ganacsiga ee ku yaala Jowhar, kadib markii xubno ganacsato ah Al-shabaab ugu yeereen degmada Aadan-yabaale oo ka tirsan Sh/dhexe, kuwaas oo ku sugnaa Magaalada Jowhar.
Warar haatan ka imaanaya Jowhar ayaa sheegaya in inta badan Goobaha ganacsiga ee magaaladaas maanta ay xiran yihiin, waxaana lagu xiray amarka Maamulka Hirshabeelle, maadama ganacsatadaas qaarkood looga yeeray deegaanka Aadan-yabaal oo ay Al-shabaab xukumaan.
Lama oga sababta ganacsatadaas loogu yeeray, balse waxaa hubanti ah in Al-shabaab canshuur ka qaadaan ganacsatada magaalada jowhar. Sidoo kale, waxaan la ogeyn talaabada kale ee uu Maamulka Hirshabeelle qaadayo haddii xubnahaas Shabaab jira ay soo laabtaan.
Previous articleBaidoa: Crossroads of despair in drought-ravaged Somalia
Next articleDowlada Shiinaha oo ergay cusub u soo magacaawday Geeska Afrika
Somaliland oo ka hadashay dagaalka maanta ka dhacay Gobolka Sanaag
Ciidamada DFS oo Go,doon geliyay Magaalada Dhuusamreeb ee xarunka Maamulka Galmudug